Ma degantahay Stavanger iyo nawaaxigeeda, fursadan caruurtaada uga faa´iidee. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Ma degantahay Stavanger iyo nawaaxigeeda, fursadan caruurtaada uga faa´iidee.
Ma tahay waalid heysta caruur dhigata iskuul, mana ku nooshahay magaalada Stavanger iyo agagaarkeeda:
Ururka Unge Minoriteter ee ka dhisan Stavanger ayaa bisha july qabanqaabin doono hal isbuuc oo sommerskole, ama shan(5) maalmood oo isku xigta.
Waxaana caruurta ka qeybgasha iskuulkan shanta maalmood ah ay heli doonaan casharo loogu diyaarinayo ka qeybqaadashada iskuulka sanadka dugsiyeedka danbe, iyo madadaalooyin kala duwan.
Waxaa lagu qaban doonaa iskuulka St svithun ungdomsskole oo kuyaal storhaug.
Wixii faah-faahin ama su´aal kala xiriir ururka Unge Minoriteter: 45551625.
Previous articleDaawo Dowlada: Dadkan ayaa karantiilka laga dhaafay, iyo sharciyada kale ee cusub
Next articleLørenskog: Hooyo labo(2) wiil oo ay dhashay ceejis ku dishay oo 21 sano lagu xukumay.